एक वायदा अनुबंध के हो?
विनिमय मा व्यापार मा एक ठूलो संख्या को विभिन्न वित्तीय साधनहरु मा भाग ले। ती मध्ये एक, र धेरै लोकप्रिय, वायदा अनुबंध हो। यो के छ र यसको विशेषताहरू के हो - यो वास्तवमा हाम्रो लेखमा के छलफल गरिनेछ।
सार र अवधारणा
"भविष्य" को अर्थ "भविष्य" वा "भविष्य" मा अंग्रेजी। एक वायदा अनुबंध (कहिलेकाहीँ मात्र सरसफाई भनिन्छ) एक विशेष दिन र पूर्वनिर्धारित मूल्यमा यो सम्झौतामा निर्दिष्ट माल बेच्न वा खरीद गर्न एक सम्झौता हो। यस्ता सामानको भूमिकामा स्टक, मुद्रा वा केवल केही उत्पादनको रूपमा कार्य गर्न सकिन्छ। एक प्रकार को रूप मा एक वायदा अनुबंध प्रकट भएको छ किनकी दुवै निर्माताहरु र खरीदारहरु को अनुचित वृद्धि को विरुद्ध या धातु, ऊर्जा या अनाज व्यापार मा मूल्य मा गिरना चाहता थियो। पछि, यो विकसित को रूप मा, यो प्रकार को लेनदेन को अन्य प्रकार को व्यापारिक उपकरणहरुमा फैल शुरू गर्यो। विशेष गरी, यो स्टक सूचकांक, ब्याज दरहरू, मुद्राहरू, आदिमा निष्कर्ष निकाल्न थाले। हाल, संसारको सबैभन्दा ठूलो वायदाको एक्सचेंजले काम गर्दछ, जहाँ यो साधनमा कारोबारको शेरको अंश हुन्छ। यी साइटहरूको सबैभन्दा लोकप्रिय हो शिकागो च्याम्बर अफ कमर्स, NYMEX (न्यूयर्क), लिफाफे (लन्डन), FORTS (RTS खण्ड)।
कुन एक वायदा अनुबंध अगाडी एक बाट फरक छ
भविष्यमा सामान खरिद गर्नुहोस् अघिल्लो सहमतिको लागतमा अर्को उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो अगाडी अनुबंध हो। यो पनि एकदम लोकप्रिय छ, र यो प्रायः खतराहरू हटाउन प्रयोग गरिन्छ । अक्सर नयाँ लगानीकर्ताहरूले अगाडि बढ्न र वायदा अनुबंधलाई भ्रष्ट बनाउँछन्, र यसकारण उनीहरूको मुख्य मतभेदहरू संकेत गर्छन्:
Futures केवल एक संगठित आदान-प्रदान मा लागू हुन्छ।
अग्रेषण कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य छ र सामान्यतया सामानको वास्तविक वितरणको उद्देश्यका लागि निष्कर्षित हुन्छ।
Futures एक उच्च तरलता छ र एक विपरीत (विपरीत) लेनदेन को निष्कर्ष को माध्यम ले तरल गर्न सकिन्छ।
लामो र शर्ट्स
जब यो एक अनुबंध खरिद गर्न आउछ, यसको अर्थ एक लामो लेनदेन वा लामो हुन्छ। यस अवस्थामा, खरीदारले एक निश्चित प्राथमिक सम्पत्ति र एक्सटेन्सन प्रदर्शन अवधिको अन्त्यमा लिनको लागी दायित्व को लागी मानिन्छ, त्यसमा संकेत गरिएको विनिमयमा विनिमय तिर्नुहोस्। छोटो रिवर्स अपरेसन हो। जब भाँडा अनुबंध "बेच्ने" हो भने, आपूर्तिकर्ताले एक निश्चित सम्पत्तिमा बेच्ने (डिलिवरी) बिक्री गर्न जब सम्झौता समाप्त हुन्छ, यसका लागि यस सम्झौतामा निर्दिष्ट मूल्य अनुसार एक्सचेंजले पैसाको उचित रकम हस्तान्तरण गर्नेछ। दुवै अवस्थामा, दायित्व पूरा गर्न को लागी चिन्ता गर्न को लागी कुनै को आवश्यकता छैन - घर को निपटान र सफा गरिरहेको छ। यसैले, निवेशक को लागि समकक्ष को वित्तीय स्थिति को जाँच को लागि आवश्यक छैन।
एक वाटर अनुबंध समाप्ति गर्न, तपाईंले जरूरी कम्पनीको दलाल खातामा एक निश्चित जम्मा जमा गर्नु पर्छ। यस रकमलाई प्रारम्भिक मार्जिन भनिन्छ, र यो भुक्तान गरिएको खाता मार्जिन खाताको रूपमा चिनिन्छ। यसको न्यूनतम साइज क्लियरिंग हाउस द्वारा तय गरिएको छ, संचित तथ्याङ्कहरु द्वारा निर्देशित र अकाउन्ट मूल्य को अधिकतम दैनिक विचलन मा ध्यान राखन को लागी। ब्रोकरेज कम्पनीले ठूलो रकममा मार्जिन जमा गर्न लगानीकर्तालाई पनि आवश्यक हुन सक्छ। यसको अतिरिक्त, ग्राहकसँग एक वायर्ड खाता हुनु पर्दछ, जुन कम्तीमा कम्तीमा 65% समावेश हुनु पर्छ। यदि यो शर्त भेटिएन भने, दलालले थप रकम बनाउन प्रारम्भिक (भिन्नता) मार्जिन को स्तर प्राप्त गर्न को लागी लगानीकर्तालाई सूचित गर्नेछ । साथै, यदि यस आवश्यकता को सम्झना छ भने, दलाल को ग्राहक को खर्च मा विपरीत आपरेशन को मदद संग यस्तो वायदा अनुबंध को निपटान को अधिकार छ। व्यापारिक सत्रको अन्त्य पछि प्रत्येक दिन क्लियरिंग हाउसले सबै खुला पदहरू पुनरुत्थान गर्दछ: विनिहरु को रकम गुमाएका निवेशकहरूको खातामा हराएको खातामा जम्मा गरिन्छ। साथै, पक्षहरूको पदहरू सही छन् वा तिनीहरूको कुल संख्या सीमित छ।
बिटप्प 24 परियोजना: समीक्षाहरू, भुक्तानीहरू, सम्झौताहरू र विचारहरू
Beginners को लागि स्टक बजार मा खेलछन। चरण निर्देशनहरूद्वारा चरण
Royalmaxbrobroers: र अब देखि हामी मा एक सिलेज मा जाऊँगा
बैंक क्रेडिट कार्ड Gazprombank
कुन लगानीमा निवेश गर्नु पर्छ?
दबाइ "Besser Alter": समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन, संरचना
कोका को अचम्मको स्वाद। एक पेय तयार लागि नुस्खा
सबैभन्दा हास्यास्पद नाम चयन
सार्वजनिक सुरक्षाको अवधारणा: "मृत पानी" भनेको के हो?
माछा मार्ने लागि हुक: विवरण, विशेषताहरु, प्रकार, आकार, र समीक्षा
कति राम्रो छुरी हान्नु bangs?
लाइटको गतिको लागि सूत्रको व्युत्पन्न। मान र अवधारणा
के पुरुष आंकडा बालिका आकर्षित छ?
Baldness "Selentsin" को लागि उपचार (ट्याब्लेट): चिकित्सकहरु र प्रयोगकर्ता को समीक्षा